Semalt Mazano KuProfita Zvinyorwa zveGoogle Analytics
Kuongorora web analytics uchishandisa zvikamu ndiyo nzira yakanakisisa yekuinzwisisa. Google Analytics inopa zvipembenene zvetsika, mafiritsi epafaira, uye zvikamu zvakapfuura pakati penzira dzakasimba pane imwe nzvimbo ye data. Muhurukuro inotevera, Oliver King, Semalt Mutengi Wakabudirira Muteereri, ari kuzokurukura mafaira ekufambisa.
Icho chirongwa chekugara kwenguva refu, uye munhu haagoni kuchinja kana kuchibvisa - free slot demos. Nyanzvi dzinokurudzira vashandisi kuti vave nehuwandu hwepasitori yepa data, iyo yavanokwanisa kushandisa kuti ichengetedze kana zvinhu zvisingakanganisi nekuita. Nhoroondo yeGoogle Analytics History inobatsira kutarisa kuchinja kwakaitwa kune filtara yepafaira. Zvinyorwa zvefaira zvino zvinoshandiswa kumishumo chaiyo-nguva, iyo inofanirwa kuongorodza mafiritsi matsva. Cherechedza migumisiro yezvinyorwa zvitsva uye gadzirisa chero zvikanganiso munguva chaiyo.
Gumi rinobatsira Google Analytics Profile Filters
1. Nyora IP Address
Ndiyo imwe yenzira dzakanakisisa dzekuedza kubudirira kwechinangwa. Kana munhu achishanda kune kambani huru, pane mukana wekuti pane vamwe vangave pane imwe kero imwechete. Pasi petabhenji yeGoogle Analytics, tanga imwe itsva, ipe zita, uye chengetedza bhokisi nemafuta akafanotaurwa. Sarudza kubatanidza motokari chete kubva kumatare eI anotevera anowirirana nemitemo yako yePI yemazuva ano.
2. Svisa IP Address
Zvakakoshawo kugadzira mapurogiramu asingabvi mutengesi wepamberi unokonzerwa nekambani uye vanozivikanwa nevanhu vatatu. Chikonzero cheizvi ndechokuti vashanyi ava vane maitiro asina kukodzera mapeji uye maitiro akasiyana neaya e "muenzi" chaiye ayo vashandi vepaweta vanovandudza nzvimbo yavo. Pasi Paya Filter mashoko, sarudza tsika yechirongwa, uye chengetedza Bhuku rekutarisa. Iyo firitsi inofanira kuverenga IP kero, uye ozoenderera mberi kuisa mufananidzo wechirongwa. Hapana nzwisiso yechirwere ichi. Iwe unogona kubudisa huwandu hweateri uchishandisa IP kero yekushandisa.
3. Itaiwo / Sarudzai Mamwe Mushandirapamwe
Kana iwe uri kutarisira hurukuro yeCCC uye usingadi imwe yehurumende yaunoshanda nayo kuti uwane ruzivo urwu, firiji inogona kubatsira kubvisa demo yeCCC kubva pane zvavanonyora..Pasi pemashoko mamwechete emafuta, ipai filtri zita idzva se "kusanidza CPC vashanyi" uye igovera tsika yechirairo label. Chengetedza Bhokisi risina kukwana uye sarudza "Campaign Medium" mumutambo wechirongwa. Iyo yefaira muenzaniso ndeyeCCC, uye haisi iyo yakaoma.
4. Lowercase on Campaign Features
Ikambani yakakura ndiyo, iyo yakakosha nhamba yemushandirapamwe wokugadzirisa zvirongwa. Chokutanga pane zvose, zvakakosha kutevedzera mazano akaoma pamusoro pekuti munhu anofanira kutumidza sei mushandirapamwe wavo. Kuti ukunde dambudziko iri, wedzera zviduku zvishanu zvezasi pasi pemakamuti emushandirapamwe eUTM. Izvi zvinosanganisira mushandirapamwe wemushandirapamwe, nzvimbo, zvinyorwa, nguva, uye zita. Sarudza zita idzva rakadai se "Lowercase on Campaign Features." Pasi pemutambo wechirongwa, sarudza "nyaya shoma," uye shandisa "Campaign Medium" seyo filtration field. Inobatsira kuchenesa tsananguro yekutsvaga nyore muGoogle Analytics sezvo inomiririra zvese zvakanyorwa kunyoresa.
5. Chikamu chechizasi kune chikumbiro URI
URL dzinogona kutora mabhesi maviri uye mavara makuru anokonzerwa ne web server kwete kuita redirect. Mapeji maviri akafanana, ane maitiro akasiyana, anogona kunyora semazano maviri akasiyana kunze kwekutungamirira kumashoko akafanana se / about-Us / uye / about-us /. Kugadzirisa dambudziko iri, tanga firiji itsva uye utumidze zita rokuti "Lowercase pachikumbiro URI." Iko tsika yakashambadza nebhokisi rezasi riri chekucherechedza. Iyo firitsi inofanira kuverenga "Kumbira URI."
6. Isai Host Hostname kukumbira URI
Kana Google inotarisa pane imwe nzira yekushandura uye data yose yedzinzvimbo mbiri inounganidza mune imwe nhoroondo, kusiyanisa pakati pemazita maviri kungasava nyore. Kuwedzera chikamu chechipiri kana zita reimba kunofanira kubatsira kugadzirisa dambudziko racho. Ipa firiji zita rakadai se "Bata Hostname kuChikumbiro URI" uye ita kuti iite tsika. Tarisa "Advanced" checkbox. Munda A kubudisa A inofanira kunge iri Hostname, asi Munda B kuDhinda B inofanira kuva "Kumbira URI." Izvo "Chikamu Kwazvo" - Muumbi anofanirawo kuva "Kumbira URI." Yese minda inotarisirwa kunze kweMunda B, uye haifaniri kuva mamiriro ezvinhu.
7. Ivai Nzvimbo Yakananga (s)
Pane dzimwe nguva apo mumwe munhu anoshandisa webusaiti inoyevedza yepasi pose uye angada kubudisa kunze kweimwe nzvimbo. Shandisa iyi inotevera firiji: Ita iyo itsva tsika yefaira uye iidane, iti "Itai Ne Ne | Be | Ger" uye sarudza kuisa..Iyo firitsi inofanira kunge iri "Nyika" uye mufananidzo wechirongwa "Netherlands | Belgium | Germany" uye haifaniri kuva mamiriro ezvinhu.
8. Itaiwo Vashanyi Vemafoni Chete
Makambani anofanirwa kushandisa izvi kana vachida kunyatsotarisisa kushanda kwechikamu chechifambi chemafoni. Aware filfounter name is "Include Mobile" uye inofanira kunge iri tsika yechirongwa. Chengeta iyo inosanganisira bhokisi uye sarudza "Mobile?" mu filter field. Sarudza "Hongu" mumutambo wechirongwa uye "kwete" pamusana pekunzwa.
9. Itaiwo Motokari Yega Kuenda Kunonyanya Kunyoresa
Kana webhusaiti yekambani inosanganisira chikamu chebhuku uye ine vanyori vanogutsikana vanowedzera zvigaro kwavari, pane zvikonzero zvakasiyana siyana zvekuita kuti kuderedza kusvikirwa kwavo kune zvinyorwa zvingava nyore. Kuti uite izvi, tanga pre-tsanangudzo yakatsanangurwa ne "Shandisa Blog Traffic" zita. Ingosanganisira chete motokari kuenda kumadhorokitari anotanga ne "/ blog / se-subdirectory. Hazvifaniri kunge zvisiri nyaya.
10. Itaiwo Motokari Yega Kuenda Kunonyanya Kunyoresa
Inobatsira kudzivisa vamwe vanhu kutora nhamba yefaira yeGoogle Analytics nekuiisa kune dzimwe nzvimbo. Iyo inosvinawo nzvimbo yekuongorora kana kuedza domains neA running GA nhamba yefaira. Zita iyo itsva tsika yefaira "Itaiwo Example Domain" uye sarudza inosanganisira. Inofanira kuva ne "Hostname" filter field uye "exampledomain \_ .com" semufananidzo wefaira. Hazvisi nyaya yakaoma.
11. Bonus: Usabvisa All Query Parameters
Zvingave zvakare zvakakosha kufuta kunze kwekushanda kwemagariro emibvunzo kana iyo webasaiti iripo ine zvakawanda zvavo. Iyo inoderedza nhamba yemapeji ari kuratidza muG GA, nokudaro ichichipa icho chinoreva zvinoreva. Shandisa "Shandisai All Query Parameters" sezita remutambo wetsika. Tarisa "Advanced" checkbox. Munda A kubudisa A inofanira kuva Chikumbiro URI, uye siya Munda B kuti ubvise B pasina. Izvo "Chikamu Kwazvo" - Muumbi anofanirawo kuva "Kumbira URI." Yese minda inotarisirwa kunze kweMunda B, uye haifaniri kuva mamiriro ezvinhu.
Kupa Mutemo Wechirongwa
Kuzadzikisa mafayili eGoogle Analytics ari munzira iyo munhu akawedzera nayo. Zvinokwanisika kuchinja iwo muzvirongwa zvepurogiramu mu dashboard yemutungamiri